Real Madrid Oo Dacweynaysa Cristiano Ronaldo Iyo Wargeys Kasoo Baxa Portugal | Laacib.net
Real Madrid Oo Dacweynaysa Cristiano Ronaldo Iyo Wargeys Kasoo Baxa Portugal
12-10-2018 Abdiwahab A. Abeye Comments Off on Real Madrid Oo Dacweynaysa Cristiano Ronaldo Iyo Wargeys Kasoo Baxa Portugal
Kooxda kubadda cagta waddanka Spain ee Real Madrid ayaa tallaabo sharci ah la tiigsanaysa xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo iyo wargeys kasoo baxa dalka Portugal oo baahiyey in Los Blancos ay qayb ka tahay kiiska kufsiga ee lagu haysto laacibkan.
Wargeyska Correlo da Manha ayaa dhowaan qoray in Real Madrid ay ka dambaysay kiiska kufsiga ee Cristiano Ronaldo lagu haysto, isla markaana ay sannadkii 2009 sabab u ahayd in Cristiano uu heshiis lacag badan kaga baxday ku aamusiiyo Mayorga, si ay wakhtigaas ugu suurtogasho inuu u wareego Santiago Barnabeu.
Wargeysku waxa uu intaas ku daray in Ronaldo uu si adag iskaga difaaci doono kiiskan, isagoo dhinaca kalena xusay in Real Madrid ay ku cadaadisay inuu lacagta siiyo Mayorga waqtigii uu shilku dhacay.
War-saxaafadeed kasoo baxay Real Madrid ayaa si adag loogu beeniyey warkan, waxaana ay ku hanjabtay inay maxkamad la tiigsan doonto wargeyska Correlo da Mancha ee ku xidhiidhiyey inay qayb ka tahay kiiska kufsiga.
“Real Madrid C.F waxay shaacinaysaa inay tallaabo sharci ka qaadayso wargeyska kasoo baxa Portugal ee Correlo da Mancha oo daabacay warbixin been abuur ah oo ay uga gol leeyihiin inay si xun ugu dhaawacaan xumcadda kooxdayada.” Sidaas ayaa llagu yidhi war-saxaafadeedka.
Real Madrid waxay intaa ku dartay in aanay waxba ka ogeyn arrimaha uu wargeysku ku eedeeyey, isla markaana aanay meelna kasoo gelin.
“Real Madrid waxba kama oga waxa dhacay ee uu wargeysku ku xidhiidhiyey ee ku saabsan Cristiano Ronaldo, mana jirto waxay ka qaban karayso iyo meel ay kasoo gasho toona. Real Madrid waxay weydiisatay caddaymo dhab ah cidda wax daabacday.” ayay Los Blancos tidhi mar kale.
Kooxdu si dhab ah uma sheegin inay dacwaddeeda kusoo darayso Cristiano Ronaldo, hase yeeshee in kiis ku saabsan arrintiisa laga furo waddanka Spain ayaa waxay noqonaysaa sidii uu isagu qayb ka yahay.